Fikambanan’ny ben’ny tanàna Faritra Ihorombe : Nihaona tamin’ny Filohan’ny Sénat Rivo Rakotovao -
AccueilSongandinaFikambanan’ny ben’ny tanàna Faritra Ihorombe : Nihaona tamin’ny Filohan’ny Sénat Rivo Rakotovao
Fikambanan’ny ben’ny tanàna Faritra Ihorombe : Nihaona tamin’ny Filohan’ny Sénat Rivo Rakotovao
Nanatanteraka fitsidihana ara-pomba ofisialy tao amin’ny biraon’ny filohan’ny Antenimieran-doholona Rivo Rakotovao ireo mpikambana ao anatin’ny fikambanan’ny ben’ny tanànan’i Faritra Ihorombe, ny faran’ny volana febroary 2018 teo. Faly tokoa ny Filohan’ny Sénat nandray azy ireo, satria tafiditra indrindra amin’ny fifandraisan’ny loholona amin’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izao fihaonana izao.
Nitarika ireto ben’ny tanàna ao anatin’ny Faritra Ihorombe ireto moa ny minisitra « Coach » amin’iny Faritra iny , dia ny minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra Neypatraiky Rakotomamonjy. « Zava-dehibe ho an’ireto ben’ny tanàna ireto ny fihaonana amin’ny filohana andrim-panjakana toa izao », hoy ny minisitra Neypatraiky Rakotomamonjy.
Anjaran’ny Andrim-panjakana tahaka ny Antenimieran-doholona tokoa ny mampahafantatra ireo mpitarika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana mikasika ny asa vitan’ny fitondram-panjakana. Maro rahateo ny asa vitan’ny fitondram-panjakana any amin’iny faritr’ Ihorombe iny toy ny lakandrano mahatondraka tanimbary 2 000 hekitara. Zava-dehibe ho an’ny fambolena izay kitro ifaharan’ny fampandrosoana any amin’iny faritra Ihorombe iny tokoa ny fahazoana ireny fotodrafitrasa maharitra nataon’ny fitondram-panjakana tarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ireny.